तपाईंले सबैभन्दा पहिले चढेको सवारी कुन हो ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र ९, २०७६ - साप्ताहिक
तपाईंले सबैभन्दा पहिले चढेको सवारी कुन हो ?
२०३२ सालमा आफ्नै टोयोटा गाडी चढेको थिएँ ।
गाउँमा हुँदा सवारी साधनका रूपमा ट्याक्टर चढेको थिएँ । पछि निजीचाहिँ टु ट्वान्टी पल्सर मोटरसाइकल ।
बिमल अधिकारी, मोडल
बाल्यकालमा सर्लाहीबाट धनुषा मामाघर जाँदा सार्वजनिक बस चढेको याद छ ।
शिव परियार, गायक
मोटरसाइकल चढेकी थिएँ ।
करिश्मा ढकाल, मोडल
सुरुमा त बस नै चढें ।
एकनारायण भण्डारी, गीतकार तथा संगीतकार
गाउँमा ट्याक्टर चढेको थिएँ ।
सुरुमा साइकल, त्यसपछि सार्वजनिक गाडी चढें अहिले मोटरसाइकल चढिरहेको छु ।
आफ्नै निजी सवारी साधनका रूपमा डिओ स्कुटर ।
एसएलसी दिएपछि १ सय ५० सीसीको कालो पल्सर ।
कक्षा १ मा पढ्दा पहिलो पटक साइकल चढेको हुँ ।
एलिस कार्की, संगीतकार/ब्याकग्राउन्ड स्कोरर
चलचित्र ‘फाइभ डेज इन काठमाडौं’ मा काम गर्दा मेकअपमा स्पेसल इफेक्ट राम्रो बनाएको भनेर निर्माताले होन्डाको सी९० मोडल स्कोर उपहार दिएका थिए । त्यही मेरो पहिलो सवारी साधन हो ।
अमृत मरहठ्ठा, मेकअप आर्टिस्ट
पहिलो पहिलोपटक चढेको सवारी सार्वजनिक यातायात नै हो, तर आफैंले किनेर चढेको चाहिँ बजाज कम्पनीको क्यालिबर बाइक हो ।
आदित्य बुढाथोकी, निर्देशक/कलाकार
म सानो छँदा सबैभन्दा पहिले चढेको सवारी रिक्सा हो । छोटो खुट्टा भएको रिक्सा चालक दाइले सिटबाट कहिले दायाँ त कहिले बायाँ धेरै तल झरेर निकै मेहनत गर्दै रिक्सा चलाएको मलाई अहिले पनि
सम्झना छ ।
सबैभन्दा पहिले चढेको सवारी चाहिँ बाउको ढाड हो, हट घोडा हट–हट भन्दै ।
घरबाट चढाईएको साधन तीनपांग्रे टोय साइकल हो । आफ्नै कमाईले चढेको चाहिँ मोटसाइकल । मैले तीनवटा ढोका भएको सेकेन्ड ह्यान्ड पजेरो पनि चढें ।
अनुराग कुँवर, कलाकार
पोखरामा छँदा सबैभन्दा पहिले ट्याक्सी चढियो । त्यहाँ पहिले–पहिले सार्वजनिक बसको जस्तै ट्याक्सीबाट पनि सेवा दिइन्थ्यो ।
वसन्त सापकोटा, संगीतकार
रत्नपार्क–भक्तपुरको जर्मन मिनीबस । आफ्नै सवारी चाहिँ हिरो होन्डा सिडी १०० एसएस (बा.४.प.८४५९) ।
अमृत सुनुवार, छाँयाकार
सायद २०४१/०४२ सालतिर हुनुपर्छ । १४–१५ वर्षको उमेरमा गाउँदेखि बजार करिब ११ किलोमिटरको बाटो थर्पुदेखि दमौली नेपाली चलचित्र ‘कान्छी’ हेर्न भनेर साथीहरूसँग ट्रकमा चढी गएका थियौं । आफूले चाहिँ किनेको छैन । २०४७/०४८ सालमा दिदी–भेनाले माउन्टेन बाइसाइकल उपहार दिनुभएको थियो । जागिर खान थालेपछि अफिसियल गाडी थियो । घरमा दाजुले किनिदिएको मोटरसाइकल थियो । त्यसैले आफैंले किनेको छैन ।
वसन्त बी थापा, गीतकार
मैले पहिलो पटक चढेको सवारी साधन कावासाकी बजाज बाइक हो ।
अनिल स्थापित, डिजाइनर
पहिलो पटक २०३५ सालमा गोरु गाडा चढे । त्यसपछि २०३६ सालमा हुड अगाडि निस्किएको चुच्चे बस चढें । त्योभन्दा अघिचाहिँ बजार जाने क्रममा आफ्नै बुवाको काँधमा चढें ।
आशान्त कर्मा, नाट्यकर्मी
मैले पहिलो पटक चढेको सवारी साधन सार्वजनिक यातायात नै हो ।
अमित श्रेष्ठ, कलाकार
प्रकाशित :भाद्र ९, २०७६
पाँच वर्ष पहिले नै स्तन क्यान्सरको पहिचान
कुन चिडिया हुन् सोनिका ?
कुन अभिनेता–अभिनेत्रीसँग भाइटीका लगाउन मन छ ?
सबैभन्दा बढी परिकार बन्ने म्ये ला
तपाईंले पाएको स्मरणीय आशीर्वाद के हो ?